Joogto ah – Red Sea Energy
Laga bilaabo 349 karoon bishii.
Xulo heerka tamarta aad isticmaashay
— Xullo Heerka Tamarta —Lama yaqaan6 000 kWh9 000 kWh12 000 kWh15 000 kWh18 000 kWh21 000 kWh24 000 kWh27 000 kWh30 000 kWh33 000 kWh33 000 kWh39 000 kWh
Xisaabi Heerka Tamarta La Adeegsaday
Qiyaasta la xisaabiyay waxay ku saleysan tahay miyir beelka aad bixisay. Laakiin haddii aad isticmaasho wax ka badan inta lagu siiyay, waa inaad iska bixisaa isticmaalka dheeraadka ah. Qiimuhu wuxuu ku saleysan yahay sicirka suuqa ee hadda jira. Haddii si kastaba ha noqotee aad u isticmaasho wax ka yar wixii aad nagu soo wargelisay, waxaan dib kuugu soo celin doonnaa tamarta aan la isticmaalin. Qiimaha aan adeegsanana waa sicirka suuqa ee hadda jira.
Waxaan aqbalayaa heshiis koronto oo lala galo Tamarta Badda Cas. Waan aqbalay dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha asturnaanta. Waxaan ku raacsanahay inaan bixin doono qiime la mid ah bil kasta. Waxaan sidoo kale ku raacsanahay in haddii sicirka go’an isbeddelo, Red Sea Energy AS ayaa iiga digi doonta 1-3 bilood kahor intaan isbeddelladu dhaqan gelin.